ग्रानाडामा किन यति धेरै भूकम्प आउँछन् ? तपाईंले जान्न आवश्यक सबै कुरा | नेटवर्क मौसम विज्ञान
ग्रानाडामा किन यति धेरै भूकम्प आउँछन् ?
जर्मन पोर्टिलो | 17/05/2022 10:00 | भूविज्ञान
ग्रानाडा एक प्रान्त हो जहाँ धेरै भूकम्पहरू बारम्बार आउँछन्। यद्यपि तिनीहरू धेरै उच्च र खतरनाक भूकम्पहरू छैनन्, तिनीहरू धेरै पुनरावर्ती हुन्छन्। यी सबैको अर्थ वैज्ञानिकहरूले इबेरियन प्रायद्वीपको यस भाग र धेरै भूकम्पका सम्भावित परिणामहरूको बारेमा थप अध्ययन गर्नुपर्छ। धेरै मानिसहरू आश्चर्य छ ग्रेनाडामा किन यति धेरै भूकम्पहरू छन्?.
यस कारणले गर्दा, हामी यस लेखलाई ग्रेनाडामा किन यति धेरै भूकम्पहरू आउँछन् र तिनीहरूका परिणामहरू के छन् भनेर गहिराइमा बताउन जाँदैछौं।
1 ग्रानाडामा किन यति धेरै भूकम्प आउँछन् ?
2 सिस्मिक झुण्ड भनेको के हो
3 छोटो गल्तीहरूमा भूकम्प
4 Junta de Andalucía भूकम्पको सामना गर्न तयार छ
5 ग्रानाडामा किन बारम्बार भूकम्प जान्छ?
प्रायद्वीपमा सबैभन्दा धेरै भूकम्पीय जोखिम भएका क्षेत्रहरू मध्ये एक ग्रानाडा बेसिनमा पृथ्वी थोरै र बारम्बार काँप्नु सामान्य हो। अटार्फे, सान्ता फे वा भेगास डेल जेनिल जस्ता ग्रानाडा सहरहरूमा सतह भूकम्पको धक्का महसुस भयो। तिनीहरू भूकम्पको शृङ्खलाका कारण हुन् जुन डिसेम्बरको सुरुमा सुरु भयो र जनवरीमा पुन: सक्रिय गरियो।
ग्रानाडा विश्वविद्यालयका भूगतिशास्त्रका प्राध्यापक तथा भूकम्पसम्बन्धी विशेषज्ञ एना क्रेस्पो ब्ल्याङ्कले भूकम्पको म्याग्निच्युड फल्टको लम्बाइसँग सम्बन्धित रहेको बताएकी छन् । ग्रेनाडा मा यो 20 वा 25 किलोमिटर मात्र छ, त्यसैले यो सम्भव छैन कि त्यहाँ सान फ्रान्सिस्को (संयुक्त राज्य अमेरिका) मा हुन सक्ने जस्तै शक्तिशाली भूकम्प क्षति हुनेछ।
हालको भूकम्पीय गतिविधिको कारण अफ्रिकी र इबेरियन टेक्टोनिक प्लेटहरू बीचको द्वन्द्व हो। "हामी प्लेट बाउन्ड्रीमा छौं जुन वर्षमा ५ मिलिमिटर सर्दैछ, र यो विकृतिले भूकम्प दोहोर्याउन सक्छ, "क्रेस्पोले भने।
सिस्मिक झुण्ड भनेको के हो
प्लेटहरूको यो ढिलो चालले नजिकैका क्षेत्रहरूमा विभिन्न परिमाणको भूकम्पलाई ट्रिगर गर्न सक्छ, जसलाई सिस्मिक स्वार्म्स भनिन्छ।
कलेज अफ जियोलोजिस्टका डीन म्यानुअल रेगुइरोले औंल्याए: "त्रुटिमा उत्पन्न हुने तनावको आराम, जो चट्टानमा दरारहरू हुन्, जब एक व्यक्ति चल्छ, एक चेन सिर्जना गर्दछ, र ती सबै सर्छन् र प्रत्येक गल्तीको कारण बन्छन्।" अन्वेषकहरूका अनुसार पछिल्लो भूकम्पको गहिराई लगभग शून्य थियो र यसको तीव्रताले सामाजिक सतर्कताको अवस्थालाई बढायो किनभने सतहमा, नागरिकहरूले यसलाई राम्रोसँग बुझेका थिए।
यदि केन्द्रबिन्दु गहिरो छ, अझ बलियो छ भने, तरंग कमजोर हुनेछ र सतहमा कम महसुस हुनेछ। IGN बाट सम्झनुहोस् कि २०१० को भूकम्प हालको म्याग्निच्युड भन्दा ठूलो थियो (रिक्टर स्केलमा 6,2) तर, यो गहिरो गएकोले, यो कम तीव्र थियो।
नतिजाको रूपमा, आज बिहान ग्रानाडामा 40 वटा भूकम्पहरू रेकर्ड गरिएका थिए र6वटा अन्डालुसिया प्रान्तहरूमा महसुस गरिएको थियो, जसमध्ये 30 वटा तीन घण्टामा परेका थिए। सबैभन्दा शक्तिशाली म्याग्निच्युड 4,3 र 4,2 थियो, सान्ता फेमा केन्द्रबिन्दु थियो। परकम्पहरूको प्रभावले ग्रानाडाका मानिसहरूलाई स्तब्ध पारेको थियो, जो भूकम्पको गतिमा अभ्यस्त भए तापनि उनीहरूलाई हिजो राती किनारमा छोडिदिए।
छोटो गल्तीहरूमा भूकम्प
‘यहाँ भूकम्प सापेक्षिक रूपमा छोटो फल्टलाइनमा छ,’ उनले भने, ‘घरको स्थानमा पनि अनुभूति हुने गर्छ । चट्टानी क्षेत्रहरूमा घटना कम स्पष्ट हुन्छ, र भेगा क्षेत्रमा, जहाँ सान्ता फे वा अटार्फे छन्, माटो ठोस नभएकाले विस्तारित हुन्छ.
यसको गहिराइले भूकम्पको प्रभावलाई पनि असर गर्छ। मंगलबार दिउँसो करिब ३ दशमलव १ डिग्री तापक्रम ५ किलोमिटर टाढा रहेको थियो । "छिमेकीहरूले महसुस गरे कि यो सामान्य थियो र यो त्यो क्षेत्रमा बढी थियो।"
ग्रानाडा विश्वविद्यालयका भूगतिशास्त्रका प्राध्यापक, जेसस गालिन्डोले यस प्रकारको घटनाको भविष्यवाणी गर्न आवश्यक डाटा सङ्कलन गर्न सक्षम हुन थप कोषको अनुरोध गरेका छन्। "हामीसँग उपकरणहरू थिए, तर हामीलाई वित्तपोषण चाहिन्छ," उनले सम्झाए, ग्रेनाडामा एक दर्जन किलोमिटर गल्तीहरू भएको तनावले अन्य नजिकैका क्षेत्रहरूमा यस प्रकारको आन्दोलन निम्त्यायो।
यसरी, उनले भविष्यवाणी गरे कि "विगतमा जस्तै भविष्यमा पनि यस्तै अन्य श्रृंखलाहरू हुनेछन्।" यूरेशिया र अफ्रिकाको मेलमिलापले बेटिक पर्वतको क्षेत्र बनाउँछ, 10 मिलियन वर्ष पहिले समुद्र द्वारा ढाकेको, बाँकी माथि उठाइएको छ ताकि भू-भाग बढी खडा हुन्छ। "वेगा क्षेत्रमा धेरै साना र मध्यम त्रुटिहरू छन्, जुन ठाउँहरू छन् जहाँ ऊर्जा केन्द्रित छ। तिनीहरूले प्लस वा माइनस5म्याग्निच्युडको भूकम्प उत्पादन गर्न सक्षम छन्।
जे भए पनि, “आजका भवनहरू पहिलेभन्दा धेरै राम्रो छन्।। तिनीहरू प्रतिरोध गर्ने संरचनाहरू हुन्। अनुहारको ट्रिम वा क्ल्याडिङ बन्द हुन गइरहेको छ।"
Junta de Andalucía भूकम्पको सामना गर्न तयार छ
इलियास बेन्डोडो, प्रेसिडेंसी, सार्वजनिक प्रशासन र आन्तरिक मन्त्रीले यो बुधबार रिपोर्ट गरे कि आयोगले ग्रानाडा र यसको महानगरीय क्षेत्रलाई असर गर्ने भूकम्पीय झुण्डहरूको "निरन्तर अनुगमन" गरिरहेको छ, यदि आवश्यक भएमा। भूकम्पीय जोखिमका लागि यसको आकस्मिक योजनाको स्टार्ट-अप चरण हाल पूर्व आपतकालीन चरणमा छकिनभने विज्ञहरूको तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पको शृङ्खला समयसँगै लम्बिन सक्छ।
ग्रानाडा प्रान्तको 112 आपतकालीन समन्वय केन्द्रको भ्रमणको क्रममा, बोन्डोडोले एन्डालुसियन इन्स्टिच्युट अफ जियोफिजिक्स र प्रिभेन्सन अफ सिस्मिक क्याटास्ट्रोफेसको पनि भ्रमण गरे र भेगाको ग्रानाडा क्षेत्रमा आएको भूकम्पसँग सम्बन्धित हस्तक्षेपहरूको शृंखलालाई प्रत्यक्ष रूपमा साक्षी दिए।
बोन्डोडोले भने कि उनले वर्तमान जस्तो समयमा ग्रानाडान्सको "सामान्य डर र अनिश्चितता" बुझेका थिए, र थपे कि "एन्डालुसिया यी आपतकालिनहरूको सामना गर्न तयार छ किनभने हामीसँग देशको अगाडि आपतकालीन सेवाहरू छन्, सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न र विशेष प्रोटोकलहरू प्रयोग गरेर हस्तक्षेप गर्न सम्भव छ।"
ग्रानाडामा किन बारम्बार भूकम्प जान्छ?
विरूपण क्षेत्र दक्षिणपूर्व अल्बेरान सागरसम्म फैलिएको छ, जहाँ 2016 मा ठूलो भूकम्प आयो, मेलिलामा 20 भन्दा बढी मानिसहरू घाइते भएका थिए। अर्को, मोरक्कोको अल हाउसेमसमा जारी राख्नुहोस्, जसले 2004 मा विनाशकारी भूकम्प पनि अनुभव गर्यो।
इबेरियन प्रायद्वीपमा रेकर्ड गरिएका केही महत्त्वपूर्ण भूकम्पहरू ग्रेनाडा नजिकै आएका थिए। यस्तै 1884 मा एरेनास डेल रे को मामला थियो, जसले 800 भन्दा बढी मानिसहरु मारे र हजारौं भवनहरु लाई नष्ट गर्यो; Albolote, 1956 मा, 11 मृत्यु संग, वा Dúrcal, हाम्रो देश मा रेकर्ड गरिएको सबैभन्दा शक्तिशाली रेकर्ड मध्ये एक, जसको म्याग्निच्युड ७.८ ​​थियो तर ६५० किलोमिटर गहिराईमा भएकोले यसले खासै क्षति पुर्याएको छैन।
यी भूकम्पहरू अघि, 1431 मा, 6,7 म्याग्निच्युडको भूकम्पले तत्कालीन मुस्लिम राज्य ग्रेनाडालाई हल्लायो र अल्हम्ब्रामा व्यापक क्षति पुर्‍यायो। मङ्गलबारको ४.५ म्याग्निच्युडको भूकम्प विगत ४० वर्षमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो, र रिक्टर स्केलमा अर्को ४.७ मापन गर्न तपाईंले १९६४ मा फर्किनु पर्ने हुन्छ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईले ग्रेनाडामा किन धेरै भूकम्पहरू छन् भन्ने बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » भूविज्ञान » ग्रानाडामा किन यति धेरै भूकम्प आउँछन् ?
मेरिडियनहरू के हुन्